FANTATRA AVOKOA IREO MPIKAMBAN’NY HCC VAOVAO: Andrasana izay handimby an-Rakotoarisoa Jean Eric – Free News
lundi, 18 octobre 2021 - 9:20
Namoaka ny fanapahan-keviny ny HCC.
Accueil/Politika/FANTATRA AVOKOA IREO MPIKAMBAN’NY HCC VAOVAO: Andrasana izay handimby an-Rakotoarisoa Jean Eric
Rehefa nandrasana tato anatin’ny andro vitsivitsy, nivoaka omaly ny didim-panjakana nanendry ireo solontena telo avy amin’ny Filohan’ny Repoblika ho isan’ireo handrafitra indray ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC). Feno, araka izany, ireo toerana sivy eo amin’ity Andrimpanjakana ity. Andrasana kosa izay handimby toerana an’ingahy Rakotoarisoa Jean Eric ho eo amin’ny toeran’ny Filohan’ny HCC.
Lucien R. 2 avril 2021
Noraisin’ny Filohan’ny Repoblika omaly 01 Aprily 2021 ny didim-panjakana laharana faha 2021- 384, manendry ireo Mpikambana telo anjarany ao amin’ny Fitsarana Avo Momba ny Lalàmpanorenana (HCC), araka ny voafaritry ny Lalàmpanorenana andininy faha 114 andalana faharoa. Rakotobe Andriamarojaona Vololoniriana Christiane, Razadrainiarison teraka Rahelimanantsoa Rondro Lucette, ary Mbalo Ranaivo Fidèle, ireo no solotena telo avy amin’ny Filohan’ny Repoblika, araka ny fampahafantarana omaly. Mbola io didim-panjakana noraisina omaly io ihany koa no nankatoa ireo voafidy ho mpikambana ao amin’ny HCC avy amin’ireo Andrimpanjakana samihafa. Isan’izany ireo solontena roa avy amin’ny Antenimierampirenena, nahitana an-dRasolo Nandrasana Georges Merlin sy Noelson William. Eo koa ireo solontena roa avy amin’ny Antenimierandoholona, dia Rakotoniaina teraka Raverohanitrambolatianiony Antonia sy Ranaivoson Rojoniaina. Ary farany ireo solontena roa avy amin’ny Filankevitra Ambony momba ny Mpitsara, nahitana an-dRakotoarisoa Florent sy Ratovonelinjafy teraka Razanoarisoa Germaine Bakoly.
Iza no ho Filoha?
Taorian’ny nivoahan’ireo anarana ireo, nipetraka ny fanontaniana: Iza no handimby toerana an’ingahy Jean Eric Rakotoarisoa ho eo amin’ny toeran’ny Filohan’ny HCC? Raha ny tombatomban’ny maro sy ny lojika aloha hatreto dia mitontona ao amin’ingahy Rakotoarisoa Florent avokoa. Florent Rakotoarisoa, izay efa minisitry ny Atitany tamin’ny fotoanan’ny Tetezamita, ary isan’ireo namolavola ny Lalàmpanorenan’ny Repoblika fahefatra, hiainantsika ankehitriny. Efa mpitsara teo anivon’ny HCC tamin’ny fiandohan’ny Repoblika fahatelo ihany koa. Ts ara toerana handray ny toeran’ny Filoha, noho izany, ity mpitsara ity, raha ny tombatombana. Izy rahateo koa no anisany zokiny indrindra amin’ireo mpikambana vaovao. Ny fivorian’izy sivy mianadahy mianaka ihany anefa no tena hamaritra izany. Raha ny fantatra, dia amin’ny herinandro ho avy izao no hisy io fivoriana voalohany io. Mandritra izany no hifidianana izay ho Filoha, ary koa hanaovana ny fitsipika anatiny. Tsiahivina fa fito taona tsy azo avaozina ny fe-potoam-piasan’ireo mpikamban’ny Fitsarana Avo Momba ny Lalàmpanorenana, araka ny voafaritry ny Lalàmpanorenana ihany.
FAMATSIAN-DRANO ANY ATSIMO: Hapetraka ny fantsona lehibe mirefy 7km ao Marolinta
OKTOBRA 2020 – MARSA 2021 : 23 tamin’ireo mpandeha 5 500 niditra an’i Nosy Be no nitondra ny Covid-19